“Guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad annaga naguma matalo shirka Dhuusamareeb” – Kalfadhi
“Guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad annaga naguma matalo shirka Dhuusamareeb”
July 15, 2020 July 15, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal, ayaa sheegay in ay fajac ku noqotay markii ay arkeen in Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad uu kasoo muuqday masawirrada madaxtii shalay tagtay magaalada Dhuusamareeb.
“Guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad matalaad uu matalayo Guddoonka Golaha Shacabka kuma tegin magaalada Dhuusamareeb”.
“Anniga iyo Guddoomiye ku-xigeenka koowaad, fajac ayey nagu noqotay markii aan xalay aragnay in Mahad Cawad uu halkaasi aaday. Nama qabato in Guddoomiyaha Baarlamaanka uu xukuumada gadaasheeda uu fadhiyo”
“Kala sareynta hay’addaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha waxaa kusoo xiga Guddoomiyaha Baarlamaanka, Mahad Cawad danihiisa ayuu u aaday Dhuusamareen ee annaga naguma matalo”.
“Dowladda waxaa ay ku dhisantahay baratakool, kuma qasbanid in aad meel walba fariisato, kama qasbanid in aad diyaarad walba aad raacdo, maxaa yeelay waxaad xambaarsantahay sharaftii Aqalka Baarlamaanka. Ihaano ayey nagu tahay marka xubin ka tirsan Guddoonka uu kasoo muuqdo meel aan munaasab aheynd”.
“Xukuumadda iyo maamul-gobolleedyadaba go’aan kama gaari karaan doorashada”